कोरोना भाइरस संक्रमणका समयमा गुर्जोको सेवन कति फाइदाजनक ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com कोरोना भाइरस संक्रमणका समयमा गुर्जोको सेवन कति फाइदाजनक ? - खबर प्रवाह
अर्थात सवै औषधिहरुमा गुर्जो मुख्य छ । सबै सुखहरुमा भोजन मुख्य छ । सबै ईन्द्रियहरुमा आँखा श्रेष्ठ छ । सबै शरीरमा शिर(टाउको) प्रधान छ ।
हाम्रो गाँउ घरमा पाईने गुर्जो (एक प्रकारको लहरा) जसको सेवनले सवै प्रकारको रोगहरुलाई निको पार्ने वा शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने कुरा चाणक्यले उल्लेख गरेका छन् ।
यी हुन् नियमित स्याउ सेवनका १२ फाइदा
काठमाडौं – फलफुलमा सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ स्याउ । बहुगुणयुक्त स्याउको उपभोग स्वस्थकर मानिन्छ । दिनको एउटा स्याउ खाँदा पनि रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक हुने विज्ञहरु बताउँछन । नियमित स्याउ सेवनले सानोतिनो रोगले भेट्दै भेट्दैन, भेटिहाले पनि डाक्टरको धाइराख्नु पर्दैन । स्याउमा प्रशस्त मात्रामा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट, फाइबर र फ्लेभोनोइड साथै फाइटोन्युट्रिएन्टले शरीरमा धेरै फाइदा गर्दछ । स्याउ […]